योगेश भट्टराईलाई जुनसुकै बेला लाग्नसक्छ अ'कल्पनिय झ'ड्का, बालुवाटारले गर्यो यस्तो तयारी ! - Rising Dainik
योगेश भट्टराईलाई जुनसुकै बेला लाग्नसक्छ अ’कल्पनिय झ’ड्का, बालुवाटारले गर्यो यस्तो तयारी !
March 22, 2021 Ramash KunwarLeaveaComment on योगेश भट्टराईलाई जुनसुकै बेला लाग्नसक्छ अ’कल्पनिय झ’ड्का, बालुवाटारले गर्यो यस्तो तयारी !
काठमाडौँ / सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमालेका नेता योगेश भट्टराईलाई ओली समूहले का’रबाही गर्ने भएको छ । ओली समूहले माधव नेपालसहित ४ जना नेताहरुलाई स्पष्टीकरण समेत सोधिसकेको छ ।
ओली समूहले गत फागुन २८ गते बसेको बैठकले एमालेको पदाधिकारी हेरफेर गरेपछि भट्टराईको सचिव पद गुमेको हो । ओलीले भट्टराईको सांसद पद समेत खो’स्ने तयारीमा छ । पार्टीको विधान विपरित लागेको भन्दै भट्टराईसहित केहि नेताहरुको सांसद पद खो’स्ने तयारी भएको छ ।
समानान्तर गतिविधिलाई निरन्तरता दिने, ओलीलाई पनि प्रश्न सोध्ने खनाल–नेपाल समूहको निष्कर्ष
यता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टी र संसदीय दलको विधानविपरीत कार्य गरेको भन्दै चार नेतालाई स्पष्टीकरणको पत्र थमाएपछि एमालेका वरिष्ठ नेताद्वय भलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल समूहले छुट्टै बैठक बसेर रणनीति तय गरेका छन् ।
खनाल–नेपाल समूहको बैठक सोमबार बसेको थियो । उपलब्ध स्थायी कमिटी सदस्यहरूको बैठकले देशभर पार्टी कमिटी, जनसंगठनहरूको भेला, बैठकलाई निरन्तरता दिने र आधारभूत तहसम्मै रहेको आफ्नो शक्ति परिचालन गर्ने निष्कर्ष निकालेको एक सदस्यले जानकारी दिए ।
“ओलीले स्पष्टीकरणको नाममा का’रबाही गर्ने जुन ध’म्की दिएका छन् । त्यसकावि’रुद्ध हामीले कार्यकर्ता परिचालन गर्नैपर्ने भएको छ । आधारभूत तहसम्मै रहेका हाम्रो शक्ति एकतृत गर्छौं,” एक नेताले भने, “देशव्यापीरूपमा अहिले भइरहेका भेला बैठकलाई जारी राख्ने र सबै जनसंगठनको राष्ट्रिय भेला गर्ने पनि निर्णय भएको छ ।”
पार्टीका महासचिव ईश्वर पोखरेलले सोमबारमात्र पार्टी नेता माधवकुमार नेपाल, उपाध्यक्ष भीम रावल, उपमहासचिव घनश्याम भुसाल र स्थायी कमिटी सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेलाई स्पष्टीकरणपत्र काटेका छन् ।
स्रोतका अनुसार त्यसबारेमा पनि आज छलफल भएको थियो । नेताहरू खामबन्दी पत्र बोकेर बैठकमा पुगेका थिए ।
महासचिवले काटेको स्पष्टीकरण पत्रको कुनै जवाफ नदिने बरु ओलीलाई थप प्रश्न सोध्ने निष्कर्ष निकालिएको ती सदस्यको भनाइ छ ।
“पार्टी अध्यक्षका तर्फबाट भएका अपराधहरूबारे साथीहरूले प्रश्न सोध्नुहुन्छ,” स्रोतले भन्यो, “ओली प्रश्नभन्दा माथि कहाँ हुन् र रु सदस्यहरूले प्रश्न सोध्न पाउने हकको उपयोग गर्छन् ।”
माधव नेपाललाई एमालेको प्रश्न- प्रचण्डको म’तियार बनेर एमाले कब्जा गर्न आएको हो ?
पूर्वप्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुलाई जे’ल हाल्न खोज्दैछन् ओली ?
ओलीवि’रुद्ध देशव्यापी अभियान चलाउने नेपालको घोषणा